Ngwa Google Ozi karịrị nbudata nde 500 | Gam akporosis
Ngwa Google Ozi karịrị nbudata 500 nde
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ngwa iji jikwaa ozi Google abụrụla otu n'ime ihe zuru oke anyị nwere n'aka anyị n'ime usoro okike gam akporo. Ọhụrụ ọ bụla melite na-enye anyị ọrụ ọhụrụ, nke pụtara ìhè bụ ndakọrịta na ọnọdụ gbara ọchịchịrị, nkwado RCS na ntanetị weebụ.
N'ihi nlebara anya nke Google na-akwụ ya, ọ bụ ihe ziri ezi na ọ gafere, na ụbọchị ole na ole, nbudata 500 nde, si otú ịghọ otu n'ime ndị kasị ebudatara Play Store ngwa. Ebe ọ bụ na ọ bụghị akụkụ nke ọrụ mkpanaka nke Google, onye ọrụ ọ bụla nwere ike iwunye ya ma kwụsị iji nke etinyegoro na ngwaọrụ anyị.
Naanị Ngwaọrụ Google Pixel na gam akporo Ngwaọrụ ejiri jikwaa ngwa ndị a arụnyere, dị ka ngwa Kalinda, ya mere, ihe ịga nke ọma nke ngwa a abụghị naanị n'ihi n'eziokwu na arụnyere ya nke ọma na ngwaọrụ gam akporo niile ruru n'ahịa, naanị na ụdị ndị ahụ akọwapụtara, nke na-abụghị nke kachasị ere.
Ọ bụrụ n’inweebeghị ohere ịnwale ngwa a ma na ị na-eji ozi ederede oge niile, ị kwesịrị ịnwale ya, ọkachasị maka ịdị mma enyere site na enwere ike jikwaa ha site na ihe nchọgharị ahụ na ntanetị weebụ.
Ekele maka nyocha ọchụchọ, anyị nwere ike ịchọta ọdịnaya nke mkparịta ụka anyị ọsọ ọsọ na mfe. Na-ahọpụta kọntaktị ngosipụta tOzi niile anyị zitere ma ọ bụ nata, tinyere foto, vidiyo, adreesị, njikọ na ụdị ọdịnaya ndị ọzọ anyị kesara.
Ozi Google dị maka gị budata n'efu na ọ dakọtara na nsụgharị niile nke gam akporo na-amalite site na Android KitKat ma dakọtara na Wear OS. Nke a bụ njikọ iji budata ya na Storelọ Ahịa Play.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwa Google Ozi karịrị nbudata 500 nde
OnePlus nwere nsogbu izute nzute maka OnePlus 7 Pro
Disney na Samsung na-ekwuputa akwụkwọ ahụaja ọhụụ maka Galaxy S10